Ifakwe ngokugcwele isitudiyo sangasese esithokomele esinendawo yokupaka - I-Airbnb
Ifakwe ngokugcwele isitudiyo sangasese esithokomele esinendawo yokupaka
Ilungele ukuvakasha kwakho okulandelayo esigodini saseBern. Lesi situdiyo esizimele esihlome ngokugcwele siseduze kakhulu nesiteshi sesitimela, ukusuka lapho iBern ingafinyelelwa khona ngemizuzu eyi-17 bese iBiel/Bienne ingaphansi kwemizuzu eyi-8 ngezithuthi zomphakathi. Indawo yokupaka yangasese iyatholakala ngaphesheya komgwaqo. Kunezitolo eziningi zokudla nezindawo zokudlela ezibangeni lokuhamba futhi ikhishi elihlangene lihlome ngokuphelele ngakho konke okudingayo ukuze uzilungiselele ukudla okulula.
Lesi situdiyo sifakwe umbhede osayizi ababili, ikhabethe elikhulu, ideski elincane, isihlalo esilula ukuphumula kanye ne-TV.
Ikhishi elihlangene likunikeza konke okudingayo ukupheka ukudla okulula, ukwenza ikhofi elisha ebhodweni le-moka noma ukushisa okuthile kuhhavini omncane kagesi. Indlu yokugezela inosinki onesibuko esikhulu phezu kwayo, indlu yangasese kanye neshawa. Uzothola nokomisa izinwele nezinye izinto zangasese. Amathawula amasha ayatholakala.
I-HDTV engu-40" ene- I-Chromecast, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
Lesi situdiyo sitholakala esakhiweni esiphakathi nendawo enkabeni yeLyss. Izitolo eziningi zokudla nezindawo zokudlela zitholakala ebangeni lokuhamba ngezinyawo.
Ngenxa yokungena ngokwakho uzimele ngokuphelele.
Ngihlala ngitholakala ngomlayezo we-Airbnb noma ngocingo futhi uma kudingeka ngingaba sesayithini ngokushesha.
Ezimeni eziphuthumayo futhi uma ngingatholakali, umndeni wami uhlala eduze.